ဦးသိန်းစိန် ၏ တောင်ကိုရီးယားခရီး စဉ် မှာ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ က နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို | Freedom News Group
Freedom News Group	The Online Newspaper. Full Weight of Journalism
FNG on Facebook
ဦးသိန်းစိန် ၏ တောင်ကိုရီးယားခရီး စဉ် မှာ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ က နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို
by FNG on October 9, 2012	တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ကို ၃ ရက်ကြာ ခရီးစဉ် လည်ပတ် စဉ် မှာ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ လီ
မြောင်ဘတ် နဲ့မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကို
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ က နွေး ထွေး စွာ ခရီး ဦးကြို ပြု ခဲ့ တယ် လို့သိရ ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် ဟာ ဒီခရီးစဉ် မှာ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ၊ ကျမ္မာရေး ၊ ပညာရေး နဲ့စက်မှု လုပ်ငန်းများ
မှာ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် နိုင် ဖို့ဆွေးနွေး ခဲ့ တယ် လို့ယောင်ဟပ် သတင်း မှာ ဖော်ပြထား ပါ
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှု တွေ အများ ဆုံး ပြု လုပ်ထား တဲ့ နိုင်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဟာ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ရဲ့စက်မှု လုပ်ငန်း အပါ အ၀င် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ
အထိမ်း အမှတ် ပြခန်း တွေ ကို သွားရောက် ကြည့် ရှု ခဲ့ ပါတယ်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← Myanmar’s Suu Kyi says willing to be president
ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ ဖျက်ဆီးမှု ကို ကောဇ့်ဘဇား သတင်းစာမှာ ဖော်ပြ →
Photo of the Week Japanese Prime Minister Shinzo Abe, second from right, plays tug-of-war with Myanmar school children at Lat Yat San Friends Elementary School in Yangon, Myanmar, Saturday, May 25, 201
In Search of Freedom Search
This Week Box Office Marion Cotillard in Christian Dior at Cannes Book of the Week Chimamanda Ngozi Adichie (born 15 September 1977) isaNigerian writer.
She is Igbo.She has been called "the most prominent" ofa"procession of critically acclaimed young anglophone authors [that] is succeeding in attractinganew generation of readers to African literature". Source : Wiki
Current Affair Killing with kindness: Burma's religious battleground - and the monks at the heart of it Cartoon of the Week (Time Magazine) In this News ! Cops Filmed Beating Suspect Who Later Died
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	8,561,172 hits
FNG မှ တင်ဆက် ဖော်ပြ ခဲ့ မှု များ အား ပြန်လည် ဖတ်ရှု ရန် Select Month May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG’s News in Brief on Twitter
WATCH: Is This A Responsible Use Of Force? huff.to/13SL0Gk via @HuffPostCrime 1 hour ago
Six years ago, the world cheered the monks behind Burma’s Saffron Revolution. Now,ahorrific new eruption of... fb.me/29QNtBVzs4hours ago
The EDL Gather In Newcastle huff.to/10r8HoC via @HuffPostUK 11 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.Want Burma info in your inbox each morning?
Get the daily news enter your mail Join 531 other followers
FNG မှ တင်ဆက်မှု များ အား ကဏ္ဍ အလိုက် ခွဲခြားထား သည်	ဘာသာပြန်
ဘဏ် နှင့် ငွေကြေး
Reader’s Choice Agence France-Presse
Union Solidarity and Development Party
YemenFNG RSS RSS - Posts RSS - Comments
Map of Myanmar and Regional Real Myanmar Burmese Old Women as Street Vendor Photo : Myanmar Friends CPT C2
Follow “Freedom News Group”